70mai अभिलेखागार - स्मार्टमे
ट्याग अभिलेखहरु: 70mai
डोम » "70mai" सँग ट्याग गरिएका प्रविष्टिहरू
स्तम्भहरू, स्मार्ट पाल्तु जनावर
जब तपाईं एक कुकुर चाहनुहुन्छ! घरमा घरपालुवा जनावरहरूको लागि smart स्मार्ट समाधानहरू
70mai, वायु शोधक, pies, भ्याकुम क्लीनर, स्मार्ट जनावरहरू, Xiaomi
मँ यो कुकुर चाहान्छु भन्ने तथ्यको कारणले गर्दा यो लेखको लागि आईडियाको साथ आयो। जे होस्, म बिरूद्ध बिभिन्न आवाजहरु सुन्छु, किनकि कपाल, किनभने एलर्जीन, किनकि तपाईं बाहिर जानु पर्छ ... त्यसैले म तिनीहरूलाई स्पष्ट स्मार्ट समाधानको साथ जवाफ दिनेछु। र जब ...
70mai A800। सस्तो, तर राम्रो र 4K मा। दोहोरो संस्करण कार क्यामेरा समीक्षा
9 नोभेम्बर 2020
70mai, 70mai a800, कार क्यामेरा
यो समय अर्को ma०mai A70 ड्यास क्यामको समीक्षा गर्ने हो। तपाईंलाई थाहा छ, म भोफो उपकरणको ठूलो प्रशंसक हुँ। 800mai एक समान मूल्य दायरा मा एक वेबक्याम बनायो, तर सावधान रहनुहोस् ... 70K मा। के यो वास्तवमै लायक छ ...
स्मार्ट अटो, अनबक्सिङ
70mai A800 डुअल - अनबक्सिंग
13 अक्टोबर 2020
70mai, 70mai a800, कार क्यामेरा, मिकावि, viofo
पछिल्लो र सबैभन्दा ठूलो ma० मई क्यामेरा अनबक्स गर्ने समय! पार्कि mode मोडको साथ पहिलो क्यामेरा र रियर क्यामेरा समावेश छ। र क्यामेराको अगाडि पहिलो पटक - पेवे!
70mai A800 - पहिलो 70mai क्यामेरा 4K र ब्याक-अप रेकर्डिंगको साथ
15 अगस्ट 2020
70mai, कार क्यामेरा
70mai Xiaomi सम्बन्धित कम्पनी हो जसले कार क्यामेरा सिर्जना गर्दछ। हामीसँग उनीहरूको धेरै उत्पादनहरूको परीक्षण गर्ने अवसर थियो, तर के हराइरहेको थियो डुअल-भिजनको क्यामेरा थियो, जुन हाम्रो कारको पछाडि भइरहेको छ। तल ...
टायर प्रेशर सेन्सर 70mai - समीक्षा
70mai, टायर प्रेशर सेन्सर
ती ग्याजेटहरू मध्ये एक तपाईंसँग छैन र सोच्नुहुन्छ कि तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन। तर जब तपाईंसँग फ्ल्याट टायर छ भने अचानक तपाईंलाई यो एकदम उपयोगी लाग्दछ! ;) 70mai टायर प्रेशर सेन्सर समीक्षा!
70mai टायर प्रेशर सेन्सर - अनबक्सिंग
के तपाई अनबक्सि like मन पराउनुहुन्छ? हामीसँग तपाईंको लागि अर्को छ! आज हामी 70mai टायर प्रेशर सेन्सरको लागि अनप्याक गर्दैछौं!
70mai बाट टायर प्रेशर सेन्सर - समीक्षा
70mai, टायर प्रेशर सेन्सर, कार
चाँडै नै हामीले सम्पूर्ण ma०mai उत्पाद पोर्टफोलियो परीक्षण गर्नेछौं;) यो कम्पनीले कारहरूको लागि स्मार्ट उपकरणहरू उत्पादन गर्दछ र शाओमीसँग सम्बद्ध छ। अर्को उत्पादन जुन हामीले समीक्षा गर्ने मौका पाएका थियौं टायर प्रेशर सेन्सर। कसरी ...
70mai कार भ्याकुम क्लीनर - भिडियो समीक्षा
70mai, कार भ्याकुम क्लीनर
यदि तपाईं भिडियोको रूपमा समीक्षा समीक्षा गर्नुहुन्छ भने, हामीसँग तपाईंको लागि केहि छ! Ma०mai कार भ्याकुम क्लीनर कुनै पनि कारमा उत्कृष्ट थप हो :) समीक्षामा स्वागत छ!